Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: ထွက်ပြေးလာသည့် မြောက်ကိုရီးယား ၁၉ ယောက် မြန်မာပြည်မှာ အဖမ်းခံရ
ထွက်ပြေးလာသည့် မြောက်ကိုရီးယား ၁၉ ယောက် မြန်မာပြည်မှာ အဖမ်းခံရ
မြောက်ကိုရီးယားက ထွက်ပြေးလာတဲ့ လူ ၁၉ ယောက်ကို မြန်မာပြည်တွင်း တရားမ၀င် ၀င်ရောက်မှုနဲ့ တရားစွဲဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားက ဘက်ပြောင်းလာသူ ၁၉ ယောက်ဟာ မြောက်ကိုရီးယားက တရုတ်ပြည်၊ တရုတ်ပြည်ကနေ အရှေ့တောင်အာရှ ကို ဖြတ်ခါ တောင်ကိုရီးယားကို သွားရောက်ဖို့ ရှိပါတယ်။
တရုတ်ပြည်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ နေခဲ့တယ်ဆိုတာ မသိရပေမယ့် မြန်မာပြည်တွင်းကိုတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာ ၀င်လာလို့ အဖမ်းခံရတာပါ။ ပြည်တွင်း ၀င်ရောက်လာလို့ ဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ် တရားမ၀င် ၀င်ရောက် လာသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေအရ အရေးယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ရဲအရာရှိ တစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။
ရှေ့သီတင်းပတ်ထဲမှာ ရုံးတင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းကနေ အကျဉ်းထောင်ထဲကို ရောက်သွားတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား ၁၉ ယောက်ထဲမှာ အမျိုးသမီး ၁၅ ယောက် အမျိုးသား လေးယောက် ပါဝင်ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား သံရုံးက ဒီကိစ္စကို ၀င်ရောက်ပြောဆိုတာ မရှိသေးပါဘူး။ မြောက်ကိုရီးယားကို ပြန်ပို့မယ်ဆိုတာ သေချာ မသိရသေးပေမယ့် မြန်မာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေအရ ပြစ်မှုထင်ရှားတယ် ဆိုရင် ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည် ချခံရဖွယ်ရှိပါတယ်။
တရုတ်ပြည် ကတော့ ဆင်းရဲမွဲတေ နှိပ်ကွပ်မှုကြောင့် ထွက်ပြေးလာတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားတွေဟာ စီးပွားရေးကြောင့် ထွက်ပြေးလာသူတွေဆိုပြီး မြောက်ကိုရီးယားကို ပြန်ပို့လေ့ရှိပါတယ်။
Posted by yahutha at 11:32 AM
အမေရိကန်မှာ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း ၂၆နှစ်အတွင်း အမြင့်ဆံ...
God bless the child without mother in new year
ဘာသာပေါင်းစုံဆုတောင်းပွဲ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုဒိုင်...
Voice of Burma No. 689 DECEMBER 21, 2008
ဘုန်းကြီးကျောင်းပေါ်ပေါက်နိုင်ရေးအတွက် ရံပုံငွေ LIV...
Dr. Cynthia Maung for Burma (VOA Burmese)
ကြွေနေတဲ့ကြယ်..ငိုနေတဲ့လ ရေးဆို ..အလိမ္မာ (japan)
မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို လူကုန်ကူးသူ ဂျပန်အမျိုးသား...
ဒေါ်စုကို အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်များ ကောင်စီ ဂုဏ်ထူ...
ထွက်ပြေးလာသည့် မြောက်ကိုရီးယား ၁၉ ယောက် မြန်မာပြည်...
Human Rights in 2008
Continuum TV: Burma in Crisis Part 1
ဘဂ္ဂဒက် မှ ဖိနပ်ပစ်သမား
မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူမှုရေးအကူအညီ ဒေါ်လာ ၅၈ သန်း ပံ့ပ...
မြန်မာဒုက္ခသည် ၃၀ ဂျပန်နိုင်ငံ လက်ခံမည်ဟု ကြေညာ
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အကျပ်အတည်း မြန်မာပြည်သူတွေကို ရိုက...
အာဆီယံ ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို စေလွှတ်ဖို့ ...
Minthuwon and U thant 100 year inviation letter
မြန်မာ့အရေး အီးယူနဲ့ဂျပန် ပုံမှန်ဆွေးနွေးဖို့ သဘော...
သတင်းမီဒီယာ နှိပ်ကွပ်မှုအတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရ ဝေဖန်...
61th Mon National Day (1)
Abhisit - New PM of Thailand (VOA Burmese)
ဆုတောင်းပွဲ သို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ စောကျော်ကျော်မင်း ထိုင်းနိုင်င...
အာဘီဆစ်ဝိဇ္ဇာဇီဝ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အရွေးခံရ
အဟာရစာစောင် အမှတ်စဉ် (၉၄)
Voice of Burma, Dec 14 2008
ကရင်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြ သားငယ် စစ်အစိုးရန...
ဦးနေ၀င်းရဲ့သမီး ဒေါ်စန္ဒာဝင်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က ပြန...
First Lady Laura Bush for Burma (VOA Burmese)
နိုဘယ်လ် ထိပ်သီး ညီလာခံ မြန်မာ့အရေး အလေးပေး
အိုဘားမားလုပ်ကြံခံရမည့်ကိန်းအပါအ၀င် ၂၀၀၉ စီးပွားရေ...
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အကြပ်အတည်း မြန်မာကို ထိခိုက်ဟု ဦး...
လူ့အခွင့်အရေး နှစ် ၆၀ ပြည့်နှစ်မှာ လူ့အခွင့်အရေး လ...
NLD(LA) Special statement (Dec 12, 2008)
လေဘေးကယ်ဆယ်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအုန်းကြိုင် ပြန်လွတ...
မြန်မာ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လော်ရာဘုရ်ှ ဆွေးနွေး
60th International Human Rights Day in Japan
မြန်မာအပါအ၀င် လူ့အခွင့်အရေးဆောင်ရွက်သူ ဘလောဂါများန...
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ တွင် နှစ် ၆၀ ပြည့် အပြည်...
မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်မှုအတွက် အမေရိကန် သမ္မတကတော် လေ...
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ ထွက်ပြေးသည့်ရဲတပ်သား (၇၀၀...
Voice of Burma, Dec72008
သတင်းသမား ဖမ်းဆီး ထောင်ချရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ တတိယ ...
RSF Award to Zagana & Nay Phone Latt (VOA Burmese)...
First Lady Laura Bush receives award from Christia...
ဦးသန့် ရာပြည့်တံဆိပ်ခေါင်း ကုလသမဂ္ဂမှ ထုတ်ဝေမည်
စစ်အစိုးရကို အရေးယူဖို့ အာဆီယံကို အမေရိကန် သံအမတ်ြ...
နှစ်ရှည်နိုင်ငံရေးအကျဉ်သား သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတ...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ကြေညာချက်
လူရွှင်တော် ဇာဂနာကို ထောင်ပြောင်းပြီ
နေဘုန်းလတ်နဲ့ ဇာဂနာကို RSF ဆုချီးမြှင့်
လျို့ဝှက်ပေါက်ကြားခဲ့သော ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချု...
ရလဒ်ကောင်းမမြင်ရရင် ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် မြန်မာနို...
Depayin-66th month Tokyo
National day in japan
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေး ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆေ...
မြန်မာပြည်သားစာစောင် (ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်)
ကိုဒီငြိမ်းလင်းကို အမှုသစ်တခုဖြင့် တရားစွဲဆိုပြန်
အမိန့် ကျ နှစ်ကြီး ထောင်ကျစာရင်း
8888 People Power
သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင် အရှင်ဂမ္ဘီရကို ခန္တီးထောင...